Meydka Qof Rayid ah oo Lagu Arkay Magaalada Jowhar iyo Cabsi Soo Wajahday Dadka ku Dhaqan Halkaasi
Home Somali News Meydka qof rayid ah oo saakay lagu arkay Jowhar
Meydka qof rayid ah oo saakay lagu arkay Jowhar
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar gaar ahaan Xaafada Horseed waxa saaka lagu arkay meydka qof rayid oo rasaas ka muuqatay jirkiisa dadkuna ay cabsi ka muujiyeen.
Waxaa shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ay yihiin kuwo si weyn ubaqdin gelisay meydka saaka la arkay waxaana badi shacabku sheegeen in xaafada Horseed dadkeeda ka muujiyeen argagax meydka markii la arkay.
Meydka la arkay maanta waxay sheegayaan dadka inay kooxo ku hubeysnaa bistoolado ay ka dambeeyeen islamarkaana ay tibaaxeen in dilka kadib markii ay fuliyeen kooxahaasi iskaga baxsadeen.
Xaafada Horseed waxaa la hadal hayaa meydka saaka la arkay waxaana lagu soo waramay in magaalada oo idil sidoo kale ay shacabku cabsi ka muujiyeen wiilka dhalinyarada ahaa ee la dilay xalay saakana meydkiisa la arkay.
Ururka Al shabaab loo maleynayaa inay ka dambeeyaan dilka qofkaasi rayidka ahaa waxaana ciidamadu goobta ay gaareen saaka iyadoo meydkana meesha laga soo qaado muddo kadib.